काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले सांसदहरुलाई सार्वजनिक पत्र लेखेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेका छन् । डाक्टर केसीले अनशनस्थलबाटै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई लेखेको सार्वजनिक पत्रको पूर्ण पाठसहित : माननीय प्रतिनिधिस ...
लण्डन। सन् २०१८ को सेप्टेम्बर–नोभेम्बरमा बेलायतको रोजगार दर ७५.८ प्रतिशत रहेको र यो तथ्याङ्क सन् १९७१ पछिको सबैभन्दा निराशाजनक भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणले सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम ...
चन्द्रागिरि। उपत्यकावासीका लागि फुर्सदको समय बिताउने आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य चन्द्रागिरिमा बुधबारको दृश्य बेग्लै थियो। नियमितजसो मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने, क्षितिजमा देखिएका हिमशृङ्खला र उपत्यकालगायत सुन्दर दृश्यलाई केन्द्रित गरेर तस्वीरमा कैद गर्ने +
Page 1 out of 1268
डेभोस। बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) प्रक्रियामा केही अन्यौल सिर्जना भएका कारण संयुक्त अधिराज्यमा कार्यरत केही फर्म तथा कम्पनीले लगानीका लागि असुरक्षाको वातावरण +
चन्द्रागिरि। उपत्यकावासीका लागि फुर्सदको समय बिताउने आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य चन्द्रागिरिमा बुधबारको दृश्य बेग्लै थियो। नियमितजसो मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने, क्षितिजमा देखिएका +
काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्दैछ । बैठकमा महासमिति बैठकले +
तीन पेट्रोल पम्प कारवाहीमा
काठमाडौं । अनसनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले सांसदहरुलाई सार्वजनिक पत्र लेखेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेका छन् । डाक्टर केसीले अनशनस्थलबाटै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुलाई लेखेको सार्वजनिक पत्रको पूर्ण पाठसहित : माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू, १६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालवाट तपाईहरूलाई यो +
लण्डन। सन् २०१८ को सेप्टेम्बर–नोभेम्बरमा बेलायतको रोजगार दर ७५.८ प्रतिशत रहेको र यो तथ्याङ्क सन् +
म्याड्रिड । करछलीको आरोप लागेका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक करोड ८८ लाख यूरो जरिवाना +
सोलुखुम्बु ।सडकमा हिउँ जमेपछि सोलुखुम्बु–काठमाडाँै सडक अवरुद्ध भएको छ । बुधबार भएको हिमपातका कारण सोलुखुम्बु–काठमाडाँै +
Page 1 out of 1690
काठमाडौं – भीमदत्त नगरपालिका–७, कञ्चनपुरकी जानकी नाथ साँझ–बिहान हातमुख जोर्न पाएमात्र सन्तोषको सास फेर्छिन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएर घरको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सपना बोकेका पति पदम कतारमा जेल परेपछि पत्नी जानकी र छोरीको अवस्था झनै कमजोर बन्न पुगेको छ। यतिखेर जानकीको एकमात्र चाहना दुई छाकको +
एनआरएनए साउदीले श्रमिक समस्या विषयक कार्यक्रम गर्ने
जानकारीफिचर फाेटाेकला तथा मनोरन्जनताजा खबरसमाचार
चन्द्रागिरि। उपत्यकावासीका लागि फुर्सदको समय बिताउने आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य चन्द्रागिरिमा बुधबारको दृश्य बेग्लै थियो। नियमितजसो मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने, क्षितिजमा देखिएका हिमशृङ्खला र उपत्यकालगायत सुन्दर 10
म्याड्रिड । करछलीको आरोप लागेका फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक करोड ८८ लाख यूरो जरिवाना तिर्न म्याड्रिडस्थित एउटा अदालतमा सहमत भएका छन् । मुद्दा सुल्टाउन पहिल्यै तयार पारिएको सम्झौतामा २३
London, Pasa Puchah Guthi UK (PPGUK) London & SOAS Nepal Society jointly organisedamemorial event to commemorate the life and contributions of late Dr Padma Ratna Tuladhar on Sunday 20th January 2019 at SOAS University, London. The event attended by 30 guests, including university students of various subjects related to social anthropology and politics of Nepal, was attended by